Xog: Midowga musharixiinta oo saddex qaybood u kala jabay iyo xogo ka soo baxaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 8 June 2021
Ilo xogagaal ah una dhuundaloola arrimaha siyaasadda ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada 2021 ay u kala jabeen saddex kooxood kadib muddo dheer oo ay isku koox ahaayeen.
Kala qaybsanka musharixiinta iyo saddexdaan kooxood ee ay kala noqdeen ayaa waxaa la sheegay inay la xiriirta isugu dhowaanshaha hab qabiil ahaan ah iyo qaar isugu dhawaaday isbaddel doon dhiig cusub ah ama siyaasiin cusub ah.
Xubnaha musharixiinta ah ee kala ah Maxamed Siiriin, Cabdulqaadir Cosoble iyo Dr. Cabdinuur Maxamed ayaa la sheegay in sameysteen isbaheysi cusub kadib kulan ay dorraad ku yeesheen Nairobi. Murashaxa kale ee Dr. Cabdinaasir Cabdulle oo kulankaasi qeyb ka ahaa ayaa la sheegay in uu ka cudurtaaday isbaheysigaas inkastoo uu ku jiro mid kale.
Dhanka kalena, siyaasiyiin ay kamid yihiin musharax madaxweyne Daahir Sheekh Maxamuud Geelle, Dr. Cabdinaasir Cabdulle, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dhankooda sameestay isbaheysi cusub, halka Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Kheyre ay dhankooda noqdeen isku dhinac.